Mashandisiro ekushandisa tambo dzisiri dzepamutemo uye zvishandiso pane iOS | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa tambo dzisina kufanira uye zvishandiso pane iOS
Pablo Aparicio | | IPhone zvishongedzo, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Vazhinji vaverengi (uye vapepeti) veiyo Actualidad iPhone senge Apple zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvinouya kwatiri kubva kuCupertino zvinowanzove zvine dhizaini huru uye zvinopa yakanaka kwazvo mushandisi ruzivo. Asi zvinofanirwa kuzivikanwa kuti hazvisi zvese zvine hukama neapuro zvakanaka. "Udzvanyiriri" hwavanoisa hune divi raro rakanaka, senge kuchengetedzeka kukuru kupfuura mune mamwe masisitimu anoshanda kana kuti zvese, zvingave zvakagadzirwa neApple kana nevechitatu, zvinoshanda nenzira yakafanana. Asi, kune rimwe divi, izvo zvinoitika zveapuro zvingasafadza vashandisi nguva dzose, sezvazvinogona kana pavanotimanikidza kushandisa zvishongedzo. yepamutemo kana MFi pane yedu iPhone, iPod Kubata kana iPad.
Muchikamu chino isu tichaedza kujekesa kusahadzika kwakawanda kwakabatana ne iPhone zvishongedzo, zvese izvo zvakagadzirwa neApple, izvo zviri MFi zvakafemerwa uye izvo zvisina kana imwe kana imwe. Kunyangwe paine chinhu chimwe chaungave uchitoziva kare: iyo apple accessories Ndidzo dzinodhura, dzinoteverwa neidzo dzakasimbiswa neMFi uyezve kune zvimwe zvishandiso zvakachipa, asi zvine njodzi.
1 Ndeupi musiyano uripo pakati pechishongedzo chepamutemo nechisiri chepamutemo?
2 Ko kana ndikashandisa isiri-yekutanga tambo kubhadharisa iyo iPhone?
3 Ungaziva sei kana yekutanga tambo kana chishongedzo chiri MFi inosimbiswa?
4 Ko izvo zvisiri zvepakutanga zvishandiso zvinoshanda pane iyo iPhone?
5 Zvekuita kana iwo meseji "Iyi tambo kana chishongedzo chisina kusimbiswa" ichioneka
6 Nei Apple isingakuregedze uchishandisa zvishandiso zvekunyepa paiyo iPhone?
Ndeupi musiyano uripo pakati pechishongedzo chepamutemo nechisiri chepamutemo?
YAKANYANYA Cable iPhone ...
Mhinduro iri nyore: Zvinoenderana. Semuenzaniso, kune tambo kubva kune vanogadzira zvigadzirwa izvo zvakafanana chaizvo, zvakanyatsoita, kune vepamutemo, asi kune zvekare zvimwe izvo, sekutaura kunoita, "rinotaridzika sezai kune chestnut". Ose mazai uye chestnut ane ovoid muchimiro, asi kana goko kana zvemukati hazvina chekuita nazvo.
Zvakawanda mumidziyo yeApple seyese chero mugadziri, pane chinhu chimwe chete chatinogona kujekesa: iyo kambani inogadzira mudziyo anoziva chaizvo iyo maitiro akatevera kuigadzira, zviyero zvayo uye ndeapi mapfungwa ayo asina kusimba. Zvandiri kureva neizvi ndezvekuti kana tikashandisa chinongedzo chepamutemo, senge mabutiro, zvinonyanya kuvaomera kuti vakanganise mudziyo. Kana tikashandisa chinhu chisiri chepamutemo, zvinokwanisika kuti chishongedzo ichi chinomanikidza imwe poindi yechigadzirwa, chimwe chinhu icho, kana zvikaitika, mune yakanakisa chiitiko chinokwenya imwe poindi yacho.
Kana iri tambo mheni + iOS, tambo ine chip izvo zvichaona kana chishongedzo chiri chepamutemo kana chakagadzirwa nekambani yakabvumidzwa, inozochipa iyo MFi (Yakaitirwa iPhone) chitupa. Kana iOS ikasaona chip yakabvumirwa, haishande.
Ko kana ndikashandisa isiri-yekutanga tambo kubhadharisa iyo iPhone?
Mhinduro yacho yakafanana nemubvunzo wapfuura: zvinoenderana. Hapana chinogona kuitika Uye, kutaura zvazviri, izvi ndizvo zvinoitika kazhinji. Asi isu tinogona kutora njodzi, senge dzimwe dzataurwa pamusoro kana imwe yakakomba. kwave nezviitiko zverufu yekushandisa tambo dzisina kufanira. Zvinofanira kuve pachena kuti chikonzero hachisi chekuti havasi vepamutemo, asi kuti pane tambo dzisiri dzechokwadi dzakaipa zvakanyanya, izvo zvinogona kukonzeresa kuputira zvakashata uye isu tinogona kutambudzika nemagetsi.
Kune rimwe divi uye zvakare kuzviisa isu mune yakaipisisa kesi, yakashata yemhando tambo inogona kushaja zvakanaka Uye izvi zvinogona kukonzera maseketi mapfupi uye bhatiri rinotora nguva shoma, saka hazvina kukodzera kutenga zvishandiso kubva kumakambani asingafarirwe kuzvishandisa mune chinopfuura $ 600, haufunge?
Ungaziva sei kana yekutanga tambo kana chishongedzo chiri MFi inosimbiswa?
Chinhu chakanakisa chatingaite kuti tione kana tambo kana chishongedzo chiri MFi inosimbiswa iri tarisa mumudziyo. Sezvauri kuona mumufananidzo, wechitatu-bato MFi chishongedzo chinofanira kuve nechiratidzo chatinozoverenga "Yakaitirwa" uye pazasi pe "iPod, iPhone, iPad".
Kana iwe uchida kuziva yekutanga Apple Mheni tambo, iwe unofanirwa kutarisa iyo tambo isa "Yakagadzirwa naAppinin California" uye "Vakaungana muChina," "Vakaungana muVietnam," kana "Indústria Brasileira" chinhambwe chingangoita 18cm (7 inches) chakayerwa kubva pa USB connector, ichiteverwa nenhamba ine manhamba gumi nemaviri.
Sezano, ndingati zvakakosha kutenga muzvitoro zvepanyama zvinofarira mukurumbira. Chitoro chinonyanya kukosha pamhepo kwandiri ndecheAmazon, asi inobatawo kutengesa kwechitatu, kuitira kuti tikwanise kutenga chimwe chinhu chisiri (sezvazvakaitika kwandiri, ndakatenga tambo yedandemutande seCAT6 uye yaive CAT5e). Asi, kune rimwe divi, zvinonyanya kuomera kuti izvi zviitike kwatiri kana izvo zvatinotenga chiri chigadzirwa Amazon nheyo.
Ko izvo zvisiri zvepakutanga zvishandiso zvinoshanda pane iyo iPhone?
Mhinduro pfupi: kwete. Kunyangwe zvichitsamira pane zvinonzwisiswa se "zvepakutanga". Iwo mavambo iwo tambo idzo Apple inogadzira, asi kune zvakare asiri-epakutanga tambo, inozivikanwawo se kubva kune vechitatu mapato, vanoita basa. Kuti uwane zvishongedzo zvekushanda pa iPhone inofanirwa kusangana nechinodiwa, izvo hazvisi zvimwe kunze kwekuve neyeMFi (Yakaitirwa iPhone) chitupa. Kana mugadziri achida kushandisa zvinowaniswa neiyo iOS chishandiso, vanofanirwa kubata Apple vobva vagadzira iyo sezvavanoudzwa kubva kuCupertino. Kamwe zvese izvo Tim Cook nekambani zvinokumbira kune iye anogadzira zvigadzirwa zvaitwa, chishongedzo chiri mubvunzo (kungori ichocho) chinogashira MFi chitupa uye chinoshanda pasina matambudziko.
Panguva ino tiri kutaura nezve zvishongedzo, kwete tambo chete. Pane bluetooth accessories (senge mahedhifoni kana vanodzora mutambo) izvo zvisingade MFi certification kuti ishande.
Zvekuita kana iwo meseji "Iyi tambo kana chishongedzo chisina kusimbiswa" ichioneka
Chokwadi iwe wakambobatanidza chishongedzo kune iyo iPhone kana iPad uye inotevera meseji yabuda:
Iyi tambo kana chishongedzo hachina kuzivikanwa saka zvinogona kusashanda neiyi iphone
Chinhu chekutanga chatichaita kana isu tikaona yapfuura meseji kunamatira kuti izvo zvekushandisa zvatakatenga hazvidhure zvakanyanya. Asi panogona kuve nemhinduro, sekureba sekunge isu tine iyo jailbreak yakaitwa kune yedu kifaa kana isu takaisa vhezheni iri panjodzi ne jailbreak.
Kana isu tatoita iyo jailbreak, isu tichangoita zvinotevera:
Isu tinotsvaga nekuisa iyo tweak Tsigira Zvitsigiro Zvisina Kutsigirwa 8.
Kana iwe ukasatibvunza isu pakupera kwekumisikidza, isu tinotangazve chishandiso.
Uye kunakidzwa neyedu isiri yepamutemo yekushandisa.
El tweak ataurwa es vakasununguka uye inowanikwa munzvimbo yeBigBoss. Kana tangoiswa, tinokwanisa kushandisa izvo zvisina kufanira accessories sekunge zvakagadzirwa neApple pachayo uye zvichatisiira isu meseji yekuti iyi tambo kana chishongedzo hachina kuzivikanwa.
Nei Apple isingakuregedze uchishandisa zvishandiso zvekunyepa paiyo iPhone?
Ini ndinofunga pane zvikonzero zvikuru zviviri.
Sezvatakambotaura, chimwe chezvikonzero kuchengetedzeka, zvese zvechigadzirwa uye mushandisi. Zviitiko zverufu kubva pakushandisa zvisina kufanira zvishongedzo muenzaniso we zvinogona kuitika kana tikashandisa tambo yemhando yepamusoro, chimwe chinhu chatatsanangurawo hachisi chekuti hachisi chepamutemo, asi nekuda kwekugadzirwa kwavo kwakashata.
Uyezve, sekutaura kwatakaita, zvakare kudzivirira zvishandiso zvedu, sezvo tichikwanisa kushandisa tambo ine chipenga che "pirate" uye ruzivo rwedu runogona kubiwa nekutenda kune iyo yakagadziridzwa chip.
Chimwe chikonzero chikuru imari, hongu. Kana tikatenga zvese zviri muzvitoro zveApple, kungave muzvitoro zvepanyama kana Apple Store Online, Apple ichaita mari yakawanda. Muchokwadi, kutengeswa kwemidziyo kunounza mabhenefiti mazhinji kukambani yeCupertino, pamwe nekuwedzeredza kweizvi.
Zviri pachena kuti hapana munhu anofarira kuudzwa izvo zvishandiso zvekushandisa, asi kuzvitenga kubva kuApple tinokanganwa nezvematambudziko. Kunyangwe hongu, pamutengo wakakwira. Unofungei? Iwe unofarira zvekutanga kana zvisiri-zvepakutanga zvishongedzo?
Kana iwe uine matambudziko netambo yekuchaja kana chishongedzo, tinokurudzira kuti utarise izvi inobata netambo dze iPhone uye kurodha pasi pasina dambudziko chero ripi zvaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Mashandisiro ekushandisa tambo dzisina kufanira uye zvishandiso pane iOS
Pandinobatanidza tambo "isina kusimbiswa" ndinowana meseji uye ndizvozvo. Inotakura uye inobvumirana zvakanaka uye ndine akati wandei. Uye kutora njodzi, zvakanaka, iwe unoda kuti ndikuudze chii, iyo tambo. Icho chinhu chisina basa, chinhu chega chinogona kuitika ndechekuti ipad inodzora zvishoma nekuti kukora kwetambo kuri kushoma (uye kusimba kwakawanda hakugone kutenderera). Asi kune iPhone hapana dambudziko. Hapana chimwe
Pindura kuna Frodo
Tambo dzemheni hadzisi nyore zvachose, zvakanaka, imhaka yekuti hadzina simba rekuzvigadzirira asi mukati vane chip ine DRM uye kana isina kupupurirwa neApple, haishande kana kuti haishande sezvainofanirwa. Ndine tambo mune iyo meseji inosvetuka uye ichiramba ichishanda, mune vamwe meseji inosvetuka uye yakanangana kana kubhadharisa kana kugona kuenzanisa iyo iPhone.
Kunyangwe iyo tambo isiriyo inoramba ichirohwa muImac ya2009, inomira kuzviita kana ndikabatanidza iyo ne2014 MBA.Apple inoshandisa tekinoroji kufambira mberi asiwo kugadzira ecosystem yayo kunyangwe yakavharwa, humbowo.
Kana zvasvika pakutora njodzi, ini handingamboshandisa doko reChinese rine wachi neawa rema alarm kana isina kusimbiswa neApple Wese munhu anoita zvavanoda, ini handitambe nemagetsi emhando yepasi. Zviripachena tambo pachayo haisi kuzopaza yako iPhone, asi zvichienderana nekuti ndezvipi zvishandiso, njodzi dzakakura.
Isa zita rizere reiyo tweak anda. Tsigira Zvitsigiro Zvisingatsigirwe 8, izvo zvisingaonekwe nekuda kwezita rawakaisa iro pakutanga.
Pindura kuna mR
Yakagadzirira, ndakazvibvisa netsaona panguva yekuisa iyo ushingi uye ini handina kuzviziva. Yakagadziriswa kare saka ndatenda zvikuru nekuyambira 😉
Chinyorwa chakanaka kwazvo, ndakatenga Apple yakasimbiswa Mfi tambo neAmazon ine iyo Bolse brand "yakagadzirirwa" logo, ndeye nylon uye 1,80m, yakandibhadharira € 18 uye ndakaitora nekuti iri refu uye inopesana kupfuura yekutanga.
Mubvunzo wangu ndewekuti iyi tambo yakanaka kune bhatiri rei iphone 6 yangu? Izvo zvinodzikira nekusave iye wepamutemo kana kubhadharisa shoma?
Kana iyo tambo iri MFi haufanire kunetseka, inochaja uye ishande zvakangofanana kana yaive yekutanga. Kana iri nguva yacho, zvinotoenderana netsvimbo yaunomupa uye nemabatiro aunozviita. Kwaziwai!
Perseus Santa (@PERSEOSANTA) akadaro
Ini ndinokubvunza: iyi iri Tweak kuitira kuti meseji irege kungobuda chete? kana kuti iyo system inobvumidza iyo isiriyo tambo kuti ishande zvakajairika; Ndine iPhone 5s uye ndatenga tambo dzinoverengeka kuti ndibhadharise uye hadzishande, meseji yacho inoonekwa uye hairegedze ini ndatotenga yekutanga asi zvingave zvakanaka kuti uzive kana dzimwe tambo dzaizoshanda netweak .
Pindura kuna Perseus Santa (@PERSEOSANTA)
Bvisa meseji uye ita kuti zvishongedzo zvishande zvakajairika. Kwaziwai!
Pane yangu ipod ine jailbreak 7.1.2 haishande
Pane iPhone 5 ine iOS 8.1 haishande, yakaongororwa.
Pa iPhone 5 hazvishande!
Iine iphone 5 ios 8.1 jailbreak haina kutakura
Iyo tambo yeBelkin mumufananidzo inosimbiswa.
Patufet (@ Batista_78) akadaro
Hi Nacho, mu iPhone 6 ios 8.1, iyo tweak HAIITI kushanda. Meseji inoramba ichingobuda. Chero mazano? Shuwiro yakanakisa!
Pindura kuna Patufet (@ Batista_78)
Jt Martin akadaro
Regedza kutengesa chiutsi, hazvishande ..
Pindura Jt Martin
iPhone 5C uye iPad mini neIOS 8.1 ichiri kutakura kunyange kuisa iyi tweak, zvakare yakaedza iPhone 5S iOS 7.0.4 uye kwete kana kuisa iyo tweak yeiyo ios.
Ini ndakatoiisa muna 7.1 uye haina kushanda uye ikozvino muna 8.1 kana
Hugo (@hugo_kuno) akadaro
Ini handina kukwanisa kuiongorora nekuti ndine iOS 8.1 uye apple yakatoburitsa iOS 8.1.2, asi sezviri pachena Tsigira Zvisingatsigirwe Zvishongedzo 8 zvinoshanda chete neIOS 8.1.1.
Pindura Hugo 〰 (@hugo_loop)
Chinese Chinoco akadaro
Kana neIOS 8.1.1 yakaongororwa… .iyi tweak inyurusi !!
Pindura Chino Chinoco
Ndakatenga Tough Yakaedzwa brand MFi tambo, inorema-basa, ndaida tambo, asi mushure memwedzi mishoma yakamira kushanda, tambo iri mumamiriro akakwana, inongobhadharisa kana ini ipad yakadzimwa, shamwari ine belkin MFi uye Chinhu chimwe chete chakaitika kwaari, saka unofanirwa here kutenga Apple usb tambo? iyo nenzira iri marara, inotsemuka nyore ...
Ndakaiisa pane Iphone 5 IOS 8.1.2, uye pakutanga haina kundishandira, kudzamara ndaona kuti vanofanirwa kuenda kuZvirongwa -> SupportUnsupportedAcce ... (ini handioni chero chinhu pachiratidziri) uye shandisa basa racho, kwandiri ndakaremara nekutadza.
Mushure mekuita ingangoita maminetsi mashanu netambo yakabatana, zvinoita sekunge inondibhadharisa. Handizive kana zvichazoita senge mushanduro dzakapfuura dzeIOS kwandakakuudza kuti chishongedzo hachienderane, asi ichiri kutakura zvishoma nezvishoma.
Kana zviri zvekutanga kweiyo Apple tambo, chokwadi ndechekuti kunyangwe kupenga ini ndinobhadhara iyo paste kune tambo iyo kunyangwe ichindibvumidza kubhadharisa foni, inopedzisira yaparadzanisa chena mapurasitiki / rabha inoichengetedza mumwedzi mishoma.
Chinhu chega chandakaona mumatare eChinese ndechekuti solder yetambo dziri mukati memubatanidzi parutivi rwefoni mesh, kuwedzera kune iyo yekuti dziviriro yerabha iri pakati peiyi connector netambo inobvumira iyo tambo kutenderera uye vanoguma vachishatisa dzimwe tambo ina dzinosvika padiki pcb (panowanikwa chip inozivikanwa) dzimwe nguva kuburitsa meseji yekusaenderana, (SOMETIMES!) kudziisa mushe (zvinodikanwa kuona kwakanaka uye kupomba kuri nani) tambo inoshanda zvakakwana zvakare, asi chete dzimwe nguva.
Daniel Rubio Rocamora akadaro
Zvakanaka, Sergio akarurama ... Kurodha zvishoma asi kurodha ... Icho chinhu!
Ini ndanga ndatofunga kuti handikwanise kushandisa tambo dze10 € 1 dzandakatenga mune dealextreme lol.
Pindura kuna Daniel Rubio Rocamora
Ini ndotora pasi tambo isina kubvumidzwa tambo uye inoshanda
Pindura kuna alexck
Sergio espinoza akadaro
Imwe mhinduro, ini ne iphone 6, ios 8.1 ine jb handina kuwana mhinduro, kugadzirisa kune ios 8.2 uye hapana mhinduro, kune vanhu vakasimbisa vimbiso uye vakaichinja. Sezvo ndiri muArgentina, handikwanise kuzvishandura, ndinofanira kuenda kune imwe nyika ine chitoro chemaapuro chine iPhones
Pindura Sergio Espinoza
Izvo hazvidiwe kuti uve nejailbreak, iyo tambo haina chero chip, ndiyo usb simba adapter isingatenderi iwe kuti ubatanidze dzimwe dzisina kukodzera tambo, ingoisa imwe fixer, ingave iri Samsung kana chena mhando uye inoshanda pasina matambudziko
Mary J akadaro
Ndine iPhone 4s uye ndakatotenga tambo mbiri uye ese ari maviri haana kupupurirwa neApple, neIOS 2 yakandibhadharisa pandakaidzima, asi ndakagadzirisa kuIOS 7 uye ikozvino haibhadharise kana kuvhara kana mune chero way uye ini handina jailbreak. Chii chandingaite?
Pindura kuna Maria J
Rimwe zuva muchitoro chezvishandiso mutengesi akandiudza kuti gare gare iyo iPhone yaisazomboziva tambo yekutanga, nekuti neiyo iOS inogadziridza icharamba chero tambo, uye ikozvino pandinoyeuka, yangu iPhone 5S ndisati ndaimutsiridzira ku8.3 yakatakura zvakakwana netambo yeChinese ye $ 1500 Chilean pesos (2 € approx) asi mushure mekugadzirisazve haisisiri kutakurwa. Akataura kuti iwe waifanira kudzima otomatiki kugadzirisa basa, asi ini handina kumboziva kupi uye sei kuzviita 🙁
Ndine ma5S, ndatenga tambo dzeChinese, uye mamwe mabasa uye mamwe haadaro, zvimwewo, vamwe vanoshanda mune mamwe mapulagi kwete mune mamwe, vamwe vakashanda kwemwedzi uye pakarepo kubva pabheti ivo havashande, vamwe nzvimbo 't yakashanda kubva kune yekutanga Zvakadaro, ini ndinofunga kuti netambo dzeChinese unoisa panjodzi yekuti hadzishande, asi kana dzikashanda, dzine hunhu hwakawanda kupfuura hwepakutanga.
Mhoro shamwari, ndichiri kuwana chiziviso chekuti hachisi chinhu chinowirirana, chii chandingaite?
Mwedzi miviri yadarika ndakatenga Cable «GRIFFIN Premium Flat USB Cable» yakashanda mushe uye iko zvino yamira kuchaja uye posita inoita kunge isingawirirane neI Foni 2. Pamberi netambo dzakachipa mumwedzi 5-1 iyo posita yakaonekwa, asi izvozvi neGriffin iyo yaidhura $ arg 2 iniwo ndine dambudziko rakafanana. Mubvunzo ndewokuti izvi zvakajairika here kana kuti ndine dambudziko neI I Runhare? Gracas
Mubvunzo mumwe… chii chinoitika kana ndikashandisa doko rekutanga netambo yepirati? Zvakangoipawo here? Nekuti ini ndanzwa kuti dambudziko idoko renhema rinotumira irregular voltage.
Mufananidzo weAntonio Flores akadaro
Ndakatenga kesi yemagetsi kwema5 uye inondiudza kuti chishongedzo hachina kuzivikanwa, chii chandingaite?
Pindura kuna Antonio Flores
Ndine Jailbreak 9.1 asi handigoni kuwana tweak yekushandisa tambo dzisiri-dzakasimbiswa. Pane chero munhu anoziva nezve chero? Iyo yakaratidzwa pakutanga haina kuenderana neIOS 9.1.
Zvinosuruvarisa kuti mudziyo unodhura wakadai une yakaipa yekuchaja system, ini ndine zvishandiso zvemhando dzakasiyana nemashaja avo kubva makore apfuura uye avo vanobva kuCupertino vachiri kumhanya, ivo vachamisikidzwa zvekuti vanofanirwa kugadzira iyo "yekutanga" waya crap iyo yekupedzisira mwedzi? zvinosuwisa.
Luisa vhudzi akadaro
Ndine yangu yechitatu iPhone, iPad uye maviri Mac macomputer.Ipo painocherekedza isina-kugadzirwa tambo x vanopa iyo isingabatsiri kunyangwe yakashanda kusvika ipapo. Zvakaitika kwandiri nemidziyo yakati wandei. Kana izvi zvikaenderera, ini handizotenge chimwe chigadzirwa kubva kuApple. Pane nzira here yekubuda mumusungo uyu?
Pindura kuna Luisa cabello
hahaha pane wechitatu waya ndakaona kuti pane zvaiitika …… .. ndinofanira kutenga yepakutanga izvozvi. Iyi kambani inodarika, haitenge ichi hachizi, ndine iphone 6
Alex Acostaalex akadaro
Ndakarwadziwa kunzwa kuti Samsung yakaputika. Asi nezuro ndakaona musikana wangu wekare, Chikafu chakasikwa kusvika ndazomutora kumba ndokubatanidza yake iPhone kucharger yandinayo mumota mangu (isiriyo)… uye runhare rwakatinhira senge paunoita chibage chepopu ... MADhimoni !!! Hongu, zvakangoitika hazvina kuitika, asi zvakaitika kune wangu wekare uyo akapedzisira achirovera gonhi remota yangu uye ini ndoda kutenga tambo nyowani nekuti yake iPhone yakaputsa tambo yangu yekuChina ...
Pindura kuna Alex Acostaalex
Ini ndinofunga kuti neiyi Apple mutemo ini ndicharega kutenga zvigadzirwa zvavo. Tambo dzavo dzakapusa uye dzinodhura zvakanyanya. Apple enda kunonwa….
Ndiregerere, asi nei tambo dzekutanga marara (chaiko)? Ndave ndichishandisa iPhone kwemakore uye ini ndinogara ndichitambura nedambudziko rakafanana, ndinofanira kutenga nekutenga tambo uye nguva dzose yepakutanga, uye mashandisiro andinovapa zvakajairika, handimboda kuti vanyanye kuzvipatsanura, ndinoisa zvinhu kuvadzivirira asi hapana, ivo vanogara vachipedzisira votyora vega, nekuti ?? Chiri kunyanya kundinetsa ndechekuti ini ndichine tambo dzeApple dzandaishandisa makore matanhatu apfuura uye dzichiri nyowani, dzichiri kushanda, ini ndinotova netambo kubva kuNokia ine Symbian, iri mushe, asi iyo iPhone aiwa, ndinoti kwete Zvinotambudza kubhadhara zvakanyanya chinhu chinogara makore akati wandei, asi ingori mwedzi chete, nei izvi zvichiitika kana mumwe munhu achiziva maitiro ekuti izvi zviwedzere kutsungirira? Ndatenda
Mhoroi, ini ndakatenga yevakadzi usb tambo yeipad (kwete yepakutanga) kukanganisa kwekukanganisa kusvetuka asi kunoshanda nemazvo, chinhu chega chisingakwani nyore senge tambo yechaja yekutanga, ndinotya kuti iro remukati tebhu repad , mumwe munhu anoziva kana Zvine njodzi kuramba uchizvishandisa? Ndatenda!
Pindura kuna Diegolom
Juan Rocha akadaro
Mhoroi vanhu vese. Ini ndangotenga semi-nyowani iPhone 6 ine generic tambo, iyo yandisisina kubata charge saka ndaifanirwa kutenga yekutanga uye kushamisika ndechekuti yaisashanda; Ndakaenda nayo kusevhisi uye vakandiudza kuti yakanga isina chinhu chavaive vachichaja uye yaishanda netambo yakajairika. Ini ndoda kufunga kuti pamwe chiteshi chekuchaja chakachinjwa ne generic kubva ipapo iyo inongobhadharisa neASI yekutanga tambo. Iyo yekutanga tambo yandinoshandisa kubhadharisa ipad uye kana ichishanda.
Pindura Juan Rocha
LUIS MANSILLA akadaro
Iro "mushandisi / mutengi rudo uye kugara zvakanaka", kunovhenekwa neve iPhone moguls, ndeyekunyepedzera kwakagadzirwa-unyengeri. Chakakosha ndechekuti ivo vanonzwa kuda kunamatwa uye kunamata zvidhori asi… zvemari, nekumisikidza mitengo inoshusha; yakanyanyisa kuwedzeredza, iyo inopukunyuka kufunga kwese nehungwaru hwevanhu (mumutengo wekugadzira chinhu), zvichikuvadza zvakanyanya bhajeti revatengi vane moyo murefu. Kusungwa chaiko!
Pindura kuna LUIS MANSILLA
Fidias Munoz akadaro
Ndingafarire mavambo, asi ndinofunga kuti Apple inofanirwa kutsigira uye kuvimbika nevashandisi vayo vakavimbika, kunyanya nezvishongedzo zvinowanzo kukuvadza nekukurumidza, ndinofunga kuti kana mitengo ikakwidziridza vanhu vangazoda kubhadhara zvishoma kune yekutanga , dambudziko nderekuti wepakutanga imwe inomira kwete kwete zvishoma zvishoma, kana zvisiri zvimwe zvakawanda.
Pindura Fidias Munoz
Poll inoratidza kutsigira kwevanhu kweApple kurwisa FBI
Apple yakatumira mamirioni 11.6 Apple Watch muna 2015